Filtrer les éléments par date : jeudi, 25 juillet 2019
Any Alemaina ny filoham-pirenena teo aloha, sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara, Marc Ravalomanana. Midinika amina tomponandraikitra sy teknisianina samihafa any an-toerana izy, « mikaroka izay hahasoa ny tanindrazana ».
Isany manampy azy amin’izany Atoa Harald Gehrig, masoivohon’i Alemaina vao nandao tsy ela an’i Madagasikara, rehefa avy niasa nandritra ny dimy taona teto.
jeudi, 25 juillet 2019 19:54
Kaominina Ampasimatera: 305 taona nisiana
Nanomboka omaly ny fankalazana ny faha-305 taona nisian’ny Kaominina Ampasimatera Distrikan’i Mampikony, Faritra Sofia.
Niorina tamin'ny taona 1714 Ampasimatera.
jeudi, 25 juillet 2019 19:00
APMF: Voatendry ho Tale jeneraly Randrianantenaina Jean Edmond
Voatendry ho Tale jeneralin’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy (APMF) ny Capitaine de Vaisseau Randrianantenaina Jean Edmond. Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra androany ny didim-panjakana fanendrena azy.
Hivory tsy ara-potoana ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimierandoholona manomboka amin’ny alatsinainy 12 aogositra 2019.
Lahadinika iraisan’ny Antenimiera roa tonta ny fandinihana ny tolo-dalàna mikasika ny lalàna mifehy ny antoko mpanohitra sy ny fampahafantaran’ny governemanta ny politika ankapoben’ny fitondram-panjakana.
Miampy ny fandinihana ny fitsipika anatiny mifehy azy ny lahadinika ho an’ny Antenimieram-pirenena.
Noraisina androany nandritra ny filankevitry ny minisitra teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny didim-panjakana mampiantso io fivoriana tsy ara-potoanan’ny Antenimiera roa tonta io, izay haharitra 12 andro.
jeudi, 25 juillet 2019 18:50
Toamasina: Hametraka paikady hamongorana ireo andian-jiolahy
Hivory ny EMMO « élargie » ahitana ny Zandary, Polisy, Tafika, mpandraharaha ny fonja, ny Fitsarana, sy ny Kaominina, miaraka amin'ny Prefen'i Toamasina rahampitso zoma amin'ny 09 ora maraina. Hiara-handinika ny paikady entina hamongorana ireo andian-jiolahy eto Toamasina izy ireo. Misy koa mantsy izao ireo « bande des 15 » manao ny ataony mihitsy mitety Fokontany isak’alina.
Efa nanao hetsika manokana ny Zandary nanomboka ny atoandro teo, ka tsy hitsahatra izany raha tsy amin'ny fotoana ahitam-bokatra sy ny fiverenan'ny filaminam-bahoaka eto Toamasina indray aloha.
jeudi, 25 juillet 2019 18:42
Ady amin’ny kolikoly: Voatendry ho Tale jeneralin’ny Bianco i Andrianirina Laza Eric Donat
Nandritra ny filankevitry ny minisitra androany no nandraisana ny didim-panjakana fanendrena an’i Andrianirina Laza Eric Donat ho Tale jeneralin’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (Bianco).
Kolonely teo anivon'ny Zandarimariam-pirenena i Andrianirina Laza Eric Donat no niala rehefa niasa tao amin'ny Bianco. Administratera sivily, mpahay lalàna ary efa lehiben'ny sampana mpanao fanadihadiana (Chef de division investigation) tao amin'ny Bianco Mahajanga izy.
Izy no mandimby toerana an’i Andriamifidy Jean Louis, izay tapitra tamin’ny 24 jona 2019 ny 5 taona tsy azo havaozina, ny fe-potoana iasan’ny Tale jeneralin’ny Bianco.
Resin’i Madagasikara tamin’ny isa 12 noho 7 i La Réunion nandritra ny famaranana teo amin’ny taranja rugby lalaovin’olona fito, sokajy lehilahy androany. Lasan’ny Makis ny medaly volamena. Maorisy kosa no laharana fahatelo.
jeudi, 25 juillet 2019 17:09
Kitra - Barea CHAN: Anatin’ny fifantohana amin’ny fihaonana amin’ny Os Mambas Mozambikanina
Hiatrika lalao iraisam-pirenena etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny Barea CHAN amin’ny alahady 28 jolay izao, hifandona amin’ny Os Mambas Mozambikanina.
Tonga nanolotra taratasim-bola roa, mitentina 10.000.000 Ariary ho azy ireo tetsy Mahamasina androany i Hery Rasoamaromaka, niaraka tamina filohan’ny ligim-paritry ny baolina kitra vitsivitsy.
Kandida amin’ny fifidianana filohan’ny Federasiona malagasy amin’ny baolina kitra i Hery Rasoamaromaka. Nanamboatra ireo kianja filalaovam-baolina sentetika maro, mpandraharaha, ary mpanao « rallye » ihany koa.
Etsy amin’ny hotely Ibis Ankorondrano no mipetraka ny Barea CHAN manomboka androany.
Notsenaina tamin’ny fomba makotroka ny fiverenan’ireo mpitsara telo lahy teratany kameroney nitantana ny lalao famaranana tamin’ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra, na CAN 2019 tany Egypta farany teo.
Teo i Sidi Néant Alioum Alioum, izay mpitsara afovoany, nampian’i Evarist Menkouande ary Elvis Nguegoue. Fiara maro no namakivaky ny tanànan'i Yaoundé renivohitr’i Cameroun tamin'ny fahatongavan’izy ireo.